CDL ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal Pump - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း SOG ညှစ်ထုတ်လိုက်
WQGS Submersible မိလ္လာ Pump
CDL ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal ...
CDLF ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal ...
CHLF Horizontal Multistage သံမဏိ centrifugal ...
CHL Horizontal Multistage သံမဏိ Centrifuga ...
CDL ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal Pump
CDL / CDLF ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်မှာကွဲပြားခြားနားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုနဲ့ဖိအားနှင့်အတူစက်မှုဇုန်အရည်မှကိုထိပုတ်ပါရေထဲကနေအမျိုးမျိုးသောအလတ်စားသိရှိစေရန်သုံးနိုငျဒေါင်လိုက် Multi-functional ဖြစ်စေ products.It တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ CDLF အနည်းငယ်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအရည်အဘို့သင့်လျော်သည်နေချိန်မှာ CDL အမျိုးအစား, Non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအရည်သယ်ဆောင်ဖို့သက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Catalogue Download
CDL စံလျှပ်စစ်မော်တာအားဖြင့်မောင်းနှင်သောဒေါင်လိုက် Non-မိမိကိုယ်ကို Prime multistage centrifugal စုပ်စက်, တစျမြိုးပါပဲ။ အဆိုပါမော်တာ output ကိုရိုးတံတိုက်ရိုက်နားချင်းဆက်မှီမှတဆင့်စုပ်စက်ဝင်ရိုးနှင့်အတူချိတ်ဆက်။ အဆိုပါဖိအားပေးမှုခံနိုင်ရည်ဆလင်ဒါများနှင့်နေထိုင်သော့ခလောက်နှင့်အတူစုပ်စက်ခေါင်းနှင့်ဝင်ပေါက် & ထွက်ပေါက်အပိုင်းများအကြား fixed နေကြသည်။ အဆိုပါဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အတူတူလေယာဉ်မှာစုပ်စက်အောက်ခြေမှာတည်ရှိနေကြသည်။ စုပ်စက်၏ဤမျိုးကိုထိရောက်စွာ Out-of-အဆင့်နှင့် Overload ခြောက်သွေ့-ပြေးကနေတားဆီးဖို့အသိဉာဏ်ကာကွယ်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
1) ထူးအိမ်သင်မရှိအစိုင်အခဲ granules နှင့်အမျှင်များစင်ကြယ်သော Non-မီးလောင်လွယ်ခြင်းနှင့် Non-ပေါက်ကွဲအရည်။
2) အရည်အပူချိန်: ပုံမှန်အပူချိန်အမျိုးအစား: -15 ℃ ~ + 70 ℃; ရေပူအမျိုးအစား: -15 ℃ ~ + 120 ℃
3) ဝန်းကျင်အပူချိန်: + 40 ℃အထိ
4) အမြင့်: 1000m အထိ
5) အခါဂီယာအလတ်စား၏သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ်ထဲမှာပါတဲ့ရေ, က High-ပါဝါတစ်ဦးမောင်းနှင်မော်တာကို select ရန်လိုအပ်သောကြောင်းကိုကျော်လွန်နေပါသည်။
6) PH ကို 5-8
စွမ်းဆောင်ရည်:2မီတာ 500 အထိ ³ / h
ဦးခေါင်း: 15 ထ 195 မီတာ
ထိရောက်မှု: 72% 92,5% အထိ
လည်ပတ်မြန်နှုန်း: 2900, r / မိနစ်
Power: 15 KW အထိ 0.37
1) ရေပေးဝေရေး: Waterworks ၌ရေစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများတွင်တိုးမြှင်, အဓိကပိုက်လိုင်းတိုးမြှင်။
, ဖြစ်စဉ်ကိုစီးဆင်းမှုရေစနစ်ကစနစ်, High-ဖိအားအဝတ်လျှော်စနစ်, မီးတိုက်ပွဲ system ကိုသန့်ရှင်းရေး: 2) စက်မှုတိုးတက်။
3) စက်မှုအရည် Conveying: အေးနှင့်လေအေးပေးစက်စနစ်, ဘွိုင်လာရေပေးဝေရေးနှင့်စနစ်, စက်-ဆက်စပ်ရည်ရွယ်ချက်, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီ condensing ။
4) ရေကုသမှု: အစွန်းရောက် filtration စနစ်,
5) ကို Reverse Osmosis စနစ်,
6) ပေါင်းခံစနစ်, separator, ရေကူးကန်
7) ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး: လယ်ယာမြေဆည်မြောင်း, ရေမှုန်ရေမွှားဆည်မြောင်း, သည်လည်းဆည်မြောင်း။
1. ပြည့်ပူးတွဲလေကြောင်း Two-တိုင်စံမော်တာရိုက်ထည့်အအေး
2. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတန်းအစား: IP55
3. လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုအတန်းအစား: F ကို
4. စံဗို့: 50Hz: x ကို 220-230 1 / 240V
3 x ကို 200-220 / 346-380V
3 x ကို 220-240 / 380-415 V ကို
က x33 80-415 V ကို
စဉ်ဆက်မပြတ်မော်တာမြန်နှုန်း 2900rpm သို့မဟုတ် 2950rpm: 1. အားလုံးခါးဆစ် 50Hz ၏တိုင်းတာတန်ဖိုးများအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
က ISO 9006 နောက်ဆက်တွဲအေနှင့်ညီညွတ်မှုအတွက် 2. Curve သည်းခံစိတ်
3. အတိုင်းအတာ 20 ℃ Air-အခမဲ့ရေနှင့်ပြုမိသည်။ မီလီမီတာ2/ sec kinematic ထဲမှာပါတဲ့။
4. စုပ်စက်၏စစ်ဆင်ရေးကြောင့်ကြီးမားလွန်းစီးဆင်းမှုနှုန်းမှာကြောင့်မော်တာများသေးငယ်လွန်းစီးဆင်းမှုနှုန်းသည်သို့မဟုတ် Overload မှအပူတားဆီးဖို့ thickened ကွေးခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြစွမ်းဆောင်ရည်ဒေသရည်ညွှန်းရလိမ့်မည်။
ယခင်: CDLF ဒေါင်လိုက် Multistage သံမဏိ centrifugal Pump
နောက်တစ်ခု: Good User Reputation for Vertical Multistage 30hp Water Pump - WQGS Submersible Sewage Pump – SOG Pumps
ရေ pump အေးလေအေးပေးစက်
anti-ချေး centrifugal Pump
centrifugal ပိုက် Booster Pump
Chiller ရေ Pump
System ကိုရေ Pump ပျော်စေ
မြင့်မားသောဖိအားဘွိုင်လာ Feed ရေ Pump
မြင့်မားသောဖိအား Boost ပိုက် Pump
မြင့်မားသောဖိအားဒေါင်လိုက် centrifugal Pump
အမြင့် Raising အဆောက်အအုံ pump
အမြင့်ထအဆောက်အအုံ Booster Pump
စက်မှုအရည် Conveying Pump
inline ဒေါင်လိုက် Multistage Pump
Multistage centrifugal ရေ Pump
Multistage သံမဏိ centrifugal Pump
ရေသည် pump ထောက်ပံ့ရေးစနစ်
မိုးရေ Recovery ကို Pump
သံမဏိ centrifugal Pump
သံမဏိ centrifugal ရေ Pump
သံမဏိလှုံ့ဆျော centrifugal Pump
သံမဏိ Multistage pump
သံမဏိ Multistage ရေ Pump
သံမဏိဒေါင်လိုက် Multistage pump
သံမဏိရေ Pump ပျံ့နှံ့နေတဲ့
ဒေါင်လိုက် centrifugal Pump
ဒေါင်လိုက်အမြင့်ဖိအား Pump စက်ရုံ
ရေ Booster Pump
ရေဖိအား Booster pump
Pump ပျံ့နှံ့နေတဲ့ရေ Recovery ကို